Saddex Ruux oo lagu dilay dalka Maraykanka iyo tiro intaas kabadan oo la dhaawacay. – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
Saddex Ruux oo lagu dilay dalka Maraykanka iyo tiro intaas kabadan oo la dhaawacay.
On May 4, 2017 231 0
Dhacdo khasaare badan dhalisay ayaa laga soo sheegayaa dalka Maraykanka, kadib markii qof kaxeynayay Gaari uu jiiray dad ku sugnaa goob baabuurta lagu iibiyo oo ku taalla nawaaxiga magaalada Boston ee dalka Maraykanka.
Sida ay sheegeen saraakiisha Booliiska oo la hadlay warbaahinta gudaha Maraykanka, dhacdadan waxaa loo badinayaa iney tahya shil gaari oo aan ula kac u dhicin, waxaana ay meesha ka saareen shakiga la xiriira in weerarka uu ahaa mid “Argagaxiso” oo ay ula jeedaan weerarada ay fuliyaan dadka Muslimiinta.
Ugu yaraan 3 Ruux ayaa lagu dilay shilkan gaari, kuwaas oo kala ahaa Nin iyo labo haween, waxaana dhaawacyadu ay gaarayaan 9 Ruux.
Magaalada uu shilku ka dhacay waxaa lagu magacaabaa Bilajri waxaana 35KM wuqooyi galbeed kaga beegantahay magaalada Boston ee dalka Maraykanka.
Shilalka noocan oo kale ah ayaa ku badan wadamada Reer galbeedka waxaana loo aaneeyaa iyadoo darawallada gawaarida kaxeyneysa ay mararka qaarkood saqraan yihiin, waxaana sidoo kale xusid mudan in mudooyinkii ugu dambeeyey gawaarida ay qaab hub ahaan u adeegsadaan dadka Muslimiinta ah marka ay fulinayaan weeraro kaligii duulnimo ah.